साझेदारीमा सामान्य सेक्सको लागि इच्छा
कम सेक्स, लामो सम्बन्ध
पत्ता लगाउनुहोस् कि तिनीहरू सँगैको लागि के मजा छ
प्रिय असिद्ध प्रेम
यौन सम्बन्धको रूपमा साढे वर्षको लागि मिडियाले बिक्री गरिरहेको छ जो युगलहरू अत्यन्त दबाबमा पर्दैछन्। यो फिल्म, रेडियो र टिभी माध्यमबाट साधनयुक्त यौन अभिविन्यासको यस दबावबाट हटाउने समय हो।
सामान्य सेक्सको लागि इच्छा
सबज्यूजेशन, लेन्स, बंधन: ब्लुमिन्ह सेक्स को "पिप्टी शेड ग्रे" को विश्वव्यापी सफलता पछि देखि लगभग विलुप्त देखिन्छ।
फैंसी सामान्य सेक्स
को खिच्नुभयो हलिउड संस्करणमा, पहिलो लजालु र अनुभवहीन Anastasia sadomasochistic किसिम को दुनिया गर्न Anastasia परिचय गर्ने सुन्दर अरबपति मसीही ग्रे, रूप उत्तिकै क्रूर subjecting।
जटिल विषय पुरा शाम को लागू गरिएको छ र विस्तृत मास बजार मा परिचय को लागी एक यौन जीवन को लागि एक बेंचमार्क बन गयो।
यसलाई पहिले नै एक महसुस एक queasy मा ​​छिर्न सक्नुहुन्छ देखि: यो एक पूरा सेक्स जीवन देखाउन सक्षम रहेको आउँदा, एक भन्दा ज्ञात यौन अभ्यासहरू पहिले नै प्रयास गरेका छन् गर्नुपर्छ - वा सधैं फिल्म र हिरो कसरी गर्न पाना, मा कम से कम महिमा डुब्नु कायम।
दिन, दिन बाहिर - जहाँ पनि तपाईले हेर्नुहुन्छ, तपाईलाई सन्तुष्ट व्यक्तिहरू, क्रान्तिको निकायहरू देख्नुहुन्छ र उत्तम सेक्सको अन्त्य गर्नुहोस्। निस्सन्देह, वास्तविकता पूर्णतया फरक छ: अवकाश-समय तनाव, काम र परिवारको अलावा, प्रायः कम समय बाँकी छ वा सामान्य, व्यापक सेक्सको आनन्द उठाउने इच्छा छ। साथै, कामुक Vorturnen कि तपाईं टिभी लगातार लगातार मार्बर्नेट मा प्राप्त हुन्छ, सामान्यतया समय भन्दा कम हुन्छ।
बरु युवतीहरू एकअर्कासँग यौन सम्बन्धको सट्टा तिनीहरूले टेलिभिजनको सामने खानुभयो। निस्सन्देह धेरै सोध्छन्: हाम्रो रिश्ते वा हाम्रो सेक्स जीवन यति बोरिंग छ? के कसैले यौन सम्बन्धी यौन सम्बन्धलाई अब जोगाउँछ?
हैम्बर्ग सेक्स शोधकर्ताहरु एक अध्ययन मा पाया छ कि यो पुरा तरिकाले सामान्य छ र साथी को कामुक विकिरण संग केहि गर्न को लागि छैन। अब एक सम्बन्ध रहन्छ, कम अंतरंग जोडे एक-अर्कासँग हुन्छन्।
नयाँ उन्मुख जोडीहरू, उनीहरूको उमेरको बावजूद, सँगै एक महिनाको सेक्समा 10 पटकको औसतको औसत। लामो समयसम्म सम्बन्धमा व्यक्तिहरूले4समयमा औसत "मात्र" मा एकै समयमा गर्छ। यो अद्भुत छ कि यो स्पष्ट रूपमा कुनै फर्किएन कि सम्बन्ध पहिले नै5वा 25 वर्ष हो। यो मुख्य कारणले गर्दा यौन सम्बन्धले स्वाभाविक सम्बन्ध सम्बन्धको सम्बन्धमा परिवर्तन गर्छ।
व्यवहारिक अनुसन्धानले विशेष गरी रिश्तेको प्रारम्भिक अवस्थाहरूमा सहमति जनाउँछ, यौन सम्पर्क एक बान्डरको रुपमा प्रयोग गर्न को लागी मान्छेहरुलाई एकसाथ भेला गर्न प्रयोग गरिन्छ। अब एक सम्बन्ध लामो छ, अधिक यौन पृष्ठभूमिमा चल्छ - अन्य कुराहरू ध्यानमा आउन। प्राय: त्यसोभए, प्रश्न उठ्छ कि त्यो सबै सही हुनेछ कि।
निस्सन्देह, यो स्पष्ट हुनुपर्छ कि यो "त्यो" गरिएको छैन। तर यो एक तथ्य हो जुन यौन जीवन सम्बन्ध सम्बन्धमा परिवर्तन हुन्छ। नयाँ प्रश्नको प्रयास गर्नुपर्दछ कि प्रश्न दुर्लभ हुन उत्प्रेरित हुन्छ।
कामुकताको दुवैको लागि मजा हुनुपर्छ
प्राय: विषयमा सम्भावित खनिज रोग र योनि सुखाको वरिपरि यो कसरी समाधान गर्न सकिन्छ। भाग्यशाली व्यक्तिहरू जुन परिवारका डाक्टर छन् जसलाई उनीहरूको पूर्ण भरोसा छ।
मुख्य मुद्दा यो हो कि प्रत्येक व्यक्ति पार्टनरको कामुकता रिश्ते को शुरुवात मा अस्तित्वमा फरक छ। संयोगमा, यो पनि फायदे छ, किनभने विशेषज्ञहरूले भन्छन् कि लामो समयसम्म साझेदारीमा कामुकता, जसलाई एक "व्यक्तिगत यौन सम्बन्ध" भनिन्छ, भावनात्मक रूपमा गहिरो यौन व्यवहार गर्दछ।
यो साझेदार सँगै पत्ता लगाउन सेक्स को प्रकारको तिनीहरूलाई पूरा दिन्छ र तिनीहरू बाहिर सँगै सपना र चाहना के प्रयास गर्न चाहनुहुन्छ के। सेक्स चिकित्सक बाहिर बाट यस्तो समयमा धेरै धाराहरु समावेश .इससंग विरुद्ध सावधानी - यो परामर्श गर्न जस्तै माथि उल्लिखित "खैरो को पचास Shades" वा अश्लील रूपमा कुनै पनि भूमिका मोडेल हुँदैन।
यो भन्दा राम्ररी भनिएको छ, निस्सन्देह, किनकि यौन प्रभाव हरेक मानिसमा दैनिक हुन्छ। यो ठीक देखि यो दैनिक सामग्री को कामुक सामग्री हो जुन यसले भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक दबाब को अंतर्गत हुन सक्छ। कसैले केवल आफैले र मिडियाबाट कथित सुपर प्रेमी बीच स्थायी तुलना गुमाउन सक्छ। अनि त्यसपछि यौन मजा हुनुपर्छ? असम्भाव्य।
सेक्स कि मजा जो जोडीहरु को लागि काम गर्दछ जो एक साथ राम्रो लग रहेको छ। यी जोडीहरूले सामान्यतया आफ्नै कामुकता पाउँछन्। महत्त्वपूर्ण कुरा हो कि तपाईं एक-अर्कासँग कुरा गर्नुहुन्छ र इमान्दारीपूर्वक तपाईंको टाउको मा के भन्छ। यो स्पष्ट छ कि यो सबैको लागि सधैँ सजिलो छैन।
बेवकूफ, यस क्षेत्र मा कुनै खेती संस्कृति छैन किनभने हाम्रो संस्कृति मा यौन क्षेत्र को लागि पर्याप्त भाषा छैन। यो स्पष्ट हुनु पर्छ कि सुन्दर सेक्स आकाशबाट पस्न सक्दैन। कामुकता र सँधै ज्वालामुखी जस्तै सँधै पटक्कै सक्दैन, भले यो संधै चलचित्रहरुमा चित्रित हुन्छ। राम्रो सेक्सको आवश्यकता छ कि तपाईं यसको लागि केही गर्न चाहानुहुन्छ।
सेक्स जीवन को आकार देने को विभिन्न तरिका र तरिका हो ताकि तपाईं यसलाई सन्तुष्ट हुन सक्छ। यो सँधै सजिलो छैन, तर त्यहाँ सधैँ एक तरिका हो।
कार्यक्रममा सेक्स: तपाईं अचानक अस्तित्वमा रहनु पर्दछ र हँसिलो द्वारा बलियो बनाइन्छ। आधुनिक व्यक्तिले आफ्नो सम्पूर्ण दिनको योजना बनाउँछन् र किन सेक्स गर्दैनन्? निस्सन्देह, यो अनौठो लाग्न सक्छ, तर यो तथ्य हो कि असामान्य यौनसम्पर्क सबै भन्दा राम्रो भन्दा राम्रो छ।
पारस्परिक वार्तालाप: यौन सम्बन्धको बारेमा कुरा गर्दा एक कामुक योजना बिर्सनु तपाईंको आफ्नै खुशीको लागि उत्प्रेरक हुन सक्छ। जस्तै तपाईं हरेक दिन दोपहर को भोजन को लागि त्यहि पकवान छैन, सेक्स केवल बोर मा छ, लामो बोरिंग र अंडा मा। नयाँ, फैंसी ठाउँहरू पत्ता लगाउँदा अन्तिम रोमांच हुन सक्छ.
समय लिन सहयोग गर्दछ: फिलिमहरूमा केवल केहि मिनेट बित्तिकै, जबसम्म विरोधीहरूले तकियाहरूमा राम्रो कुशनमा डुब्न पाउँदैनन्, वास्तवमा यो फरक छ - र यो राम्रो कुरा हो। तथाकथित "ढिलो सेक्स" ढिलो आंदोलनहरू संग गरिन्छ, तर सबै तीव्र। सेक्सको गुण छिटो बढ्दै गएको छ।
केहि नयाँ कुरा खुला छ: किताबहरू र चलचित्रहरूबाट व्युत्पन्न प्राप्त गर्न आवश्यक पर्दैन। यो केहि राम्रो गर्न को लागि यो महत्त्वपूर्ण छ। यो शर्ल, हड्डी र ज्वरो जलाउन हुँदैन। उदाहरणका लागि, तपाईं केवल आफ्नो आँखा जडान गरेर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। यसले सबै यौन किस्महरूमा मात्र निर्भर गर्दछ कि दुवै सहभागिताहरू आरामदायक महसुस गर्छन्। त्यसो कि सेक्स राम्रो छ, यो महत्त्वपूर्ण छ कि कुनै पनि स्वीकार गरिएको छैन।